ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल : जनकपुर – Tourism News Portal of Nepal
ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल : जनकपुर
नेपालको ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल हो जनकपुर । ऐतिहासिक महत्व बोकेका कारण नेपालको आन्तरिक पर्यटक मात्र होइन, विदेशीको समेत भिड लाग्ने गरेको छ । राजा जनक र उनकी छोरी सीताको जन्मभूमि हेर्न बर्सेनि उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक जनकपुर आउने गरेका छन् । जनकपुरले नेपाल र भारतलाई जनस्तरमा सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपले जोडेकाले बर्सेनि भारतीय पर्यटक ठूलो संख्यामा आउने गरेका छन् । धार्मिक पर्यटनको केन्द्र
इतिहासमा सबभन्दा बढी जनताको पीडा बुभ्mने राजा जनकको राज्यको राजधानी हो जनकपुर । जनकपुरसँग लोकतन्त्रको लामो अनुभव छ । राज्यमा खडेरी पर्दा राजा जनकले प्रजाको समस्या निवारणका लागि आफैँले हलो जोत्ने क्रममा सीता अर्थात् आदि शक्तिको जन्म भएको धार्मिक विश्वास छ ।
मध्य नेपालको दक्षिणमा अवस्थित जनकपुरमा बर्सेनि करिब २५ लाख आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् । जनकपुरस्थित विदेह मिथिला पर्यटन प्रवद्र्धन क्षेत्र विकास कार्यालयका प्रमुख सत्यनारायण साहका अनुसार विवाहपञ्चमी, रामनवमी, जानकी नवमीलगायत अवसरमा तीर्थयात्री र पर्यटक उल्लेख्य संख्यामा आउने गरेका छन् । भारतका विहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, युपी, गुजरात, बंगाललगायत स्थानबाट उल्लेख्य संख्यामा पर्यटक आउने गरेको जनकपुर होटेल व्यवसायी संघका अध्यक्ष दशरथ साह बताउँछन् । उनका अनुसार भारतबाहेक अमेरिका, जापान, चीन, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, श्रीलंकालगायत देशबाट पर्यटक जनकपुर आइरहेका छन् । यद्यपि जनकपुरको बृहत् सम्भावनाका हिसाबले यो संख्या न्यून हो ।
धर्म, संस्कृतिमा निकै धनी छ जनकपुर । करिब ५ हजार वर्षदेखि जनकपुरले धर्म संस्कृति तथा दैनिक दर्शनको शिक्षा र सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । हिन्दूहरूको श्रद्धा र आस्थाको ग्रन्थ ऋग्वेदको प्रथम मण्डलको पुस्तक यहाँ लेखिएको मानिन्छ । ऋग्वेद संसारकै सबभन्दा पुरानो र उत्कृष्ट ग्रन्थ हो ।
वरिष्ठ साहित्यकार तथा मिथिला संस्कृतिका विज्ञ डा. राजेन्द्र विमलको भनाइमा धर्म–संस्कृति, भौगोलिकता, आर्थिक स्रोतसाधन तथा राजनीतिक अनुभवले परिपूर्ण जनकपुरको सम्बन्ध मानव सभ्यताको विकासदेखि नै जोडिएको छ । ‘मिथिला संस्कृतिको केन्द्रबिन्दु, ऋषिमुनिको तपोभूमि, अष्टावक्र, गार्गी, विद्यापतिलगायतको ज्ञानभूमि हो जनकपुर,’ विमल भन्छन् । जनकपुरको आफ्नै भाषा मैथिली हो भने लिपि तिरहुत हो ।
संसारका ६ पूर्वीय दर्शनमध्ये न्याय दर्शन महर्षि गौतमले जनकपुरमा लेखेका हुन् । विश्वका सर्वोत्कृष्ट दुई सभ्यता लुम्बिनी र सम्पूर्ण आर्यावर्त हो । डा. विमलको भनाइमा सम्पूर्ण आर्यावर्तको केन्द्र जनकपुर हो । आर्यावर्तमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, इराक, इरानलगायतका मुलुक पर्छन् ।
जनकवंशीय राजाहरूमा सबभन्दा लोकप्रिय प्रतापि तथा दार्शनिकमध्ये जानकीका पिता शिरध्वज जनक थिए । उनको दरबारमा ऋषि–महर्षि आएर शास्त्रार्थ गर्थे । याज्ञवल्क्य, अष्टवक्र, शुकदेवजस्ता दार्शनिक विद्वान्लाई दरबारमा बोलाएर दार्शनिक तत्वज्ञानबारे जनकले महिनौँसम्म शास्त्रार्थ चलाउने गरेका थिए । शास्त्रार्थमा उल्लेख भएअनुसार राजा जनकले विजयी विद्वान्हरूलाई पुरस्कृत गरी पठाउँथे । राजा शिरध्वज जनक ‘सर्वे भवन्तु सुखिन र सर्वे भवन्तु निरामया’को पक्षपाती थिए । प्राचीन त्रेतायुगीन मिथिला निकै विशाल र विस्तृत थियो भन्ने कुरा विष्णु पुराणमा उल्लेख छ ।
प्राचीनकालमा मिथिला उत्तरमा हिमाल, दक्षिणमा गंगा, पूर्वमा कोसी र पश्चिममा गण्डक नदीसम्म फैलिएको थियो । तर, पटक–पटकको विभिन्न खाले अतिक्रमणका कारण मिथिलाको क्षेत्रफल संकुचित हुँदै गएको छ । ‘मिथिला कहिले भारतको दरभंगा, कहिले वैशाली तथा गोर्खाको अधीनमा थियो, तर रक्तपात र हिंसालाई यो भूमिले कहिल्यै पनि प्रश्रय दिएको पाइँदैन,’ मिथिला इतिहास र संस्कृतिका अध्येता डा. विमल बताउँछन् ।
मिथिला संस्कृतिको केन्द्रबिन्दु जनकपुरको लोकगाथा, नृत्य, भाषा, पहिरन, भोजन तथा रहनसहन भिन्न छ । जनकपुरको छठ, जनकपुरमा मनाइने दसैँ, रामजानकी विवाह महोत्सव, होली, इदलगायत पर्व उल्लेखनीय छन् ।
जनकपुर हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध तथा जैन धर्मको संगमस्थल पनि हो । विश्वप्रसिद्ध जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, तथा दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठूलो रामानन्दीय प्रवेशद्वारले जनकपुरको सांस्कृतिक परिचय अझ विस्तार भएको छ ।
जनकपुरधामको ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्वबारे विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा सन्तहरूको उद्गम स्थल, साधना भूमि, मनले चिताएको फल प्राप्त हुने स्थलको रूपमा व्याख्या भएको पाइन्छ । मठ–मन्दिरको सहर भन्दा हुने जनकपुरमा मन्दिर, कुटी र पोखरीको संख्या धेरै छ । यहाँका जानकी मन्दिर र राम मन्दिर सबैभन्दा बढी प्रसिद्ध छन् ।
मुगल शैलीमा निर्मित तीनतले जानकी मन्दिरलाई अंग्रेजीमा सीता प्यालेस, हिन्दीमा सिसमहल र बोलचालको भाषामा नौलखा मन्दिर भनिन्छ । महात्मा शूरकिशोर दासद्वारा स्थापित जानकी मन्दिर १९६८ मा निर्माण गरिएको थियो । भारतको मध्यप्रदेश राज्य टिकमगढकी रानी वृषभानु कुँवरले आफ्ना श्रीमान् राजा प्रताप सिंहलाई अनुरोध गरी १९६८ सालमा मन्दिर निर्माण गराएकी थिइन् । जानकीको पूजा–आराधनाले पुत्ररत्न प्राप्त भएकाले भाकल गरेअनुसार त्यतिवेला नौ लाख खर्च गरेर मन्दिर निर्माण गराएका थिए । त्यसैले यो नौलखा मन्दिरको नाममा प्रसिद्ध छ ।
विवाहमण्डप जनकपुरको अर्को आकर्षण हो । उक्त मन्दिरभित्र तहखाना रहेको छ । तहखानामा प्राचीन मूर्ति, पहिरन, खेलौना, आभूषणसहित दुर्लभ सामग्री राखिएको छ । मन्दिरपरिसरमा पश्चिमतर्फ राजर्षि जनकसहित उनका परिवारका मूर्तिहरू, आन्तरिक शृंगार मण्डप, हिन्दू वस्तु, ढाँचाअनुसार मन्दिर निर्माण गरिएको छ । मन्दिरको उत्तरतर्फ २४ सै घन्टा अखण्ड सीताराम जप भइरहेको हुन्छ । जसले आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धनका लागि विशेष महत्व राख्छ । जानकी मन्दिर नजिकै उत्तरतर्फ विवाहमण्डप छ ।
प्यागोडा शैलीको विवाहमण्डप तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रको भ्रमण हुँदा विसं २०४१ मा निर्माण गरिएको थियो । यस विवाहमण्डपमा भगवान् राम, सीताको स्वयंवर हुँदाका वेला उपस्थित भएका राजा जनक, दशरथ, ऋषिमुनि, वाल्मीकि, भरत , शत्रुधन, सुनैना, कैकेयीलगायत १२५ देवीदेवताका सिंगमर्मरका मूर्ति प्रतिस्थापित छन् ।
विवाहमण्डमा प्रवेश गर्न पाँच रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति शुल्क राखिएको छ । हुन त त्रेतायुगमा भागवान् राम र सीताको विवाह भएको स्थल जानकी मन्दिरभन्दा तीन किलोमिटर जनपा–१३ अन्तर्गत पर्छ, जसलाई मनिमण्डपको नामले बढी चिनिन्छ । मनिमण्डप पहाडको टिस्टो (अग्लो) जस्तो देखिन्छ । त्यसको वरिपरि गोरघोईलगायत ५ पोखरी छन् । राम–सीताको विवाह भएका वेला यी पोखरी वैवाहिक विधि भएको जनविश्वास छ । जानकी मन्दिरभन्दा पनि पुरानो मन्दिरको रूपमा राम मन्दिरलाई लिइन्छ । विसं १८३९ मा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको पालामा जनरल अमरसिंह थापाले राम मन्दिरको निर्माण गराएका थिए । प्यागोडा शैलीको राम मन्दिरमा प्र्रचीन समयका पञ्चायतन मूर्तिहरू दर्शनीय छन् । यस मन्दिरका पुजारी सन्न्यासी हुने चलन छ । राम मन्दिरपरिसरमा माता राजदेवीको मन्दिर पनि छ । पिँढीको प्रतिकलात्मक रूपमा राजदेवीमा दसंैका वेला ठूलो मेला लाग्ने गर्छ । अष्टमी तिथिको अवसरमा हजारौँ बोकाखसीको बलि दिने चलन छ ।
जनकपुरको मुटु जनकचोकमा जनक मन्दिर रहेको छ । मन्दिर सानो आकारको भए पनि यसले धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ । जनक मन्दिरलाई पनि जनरल अमर थापाले नै १८३९ मा निर्माण गराएका थिए । त्यस्तै जनकपुरका प्रसिद्ध स्थलमध्ये रत्नसागर पनि एक हो । विसं १९३४ मा निर्माण भएको यो मन्दिर पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्रको रूपमा रहिआएको छ । सो स्थानको पश्चिमी डिलमा आष्टावक्रको प्रतिमासमेत रहेको छ । सो प्रतिमा रत्नसागरको पानी लिई घर्षण गर्दा हातबाट बास्ना आउने गरेको मन्दिरका महन्थ वैकुण्ठ दासले बताए ।
जनकपुरको ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान, जहाँ भागवान् रामले सीतालाई पाउन धनुष उठाउँदा भाँचिएको थियो । सो स्थलको छेउमै भागवान् हनुमानको मन्दिर छ । शनिबार र मंगलबार सो मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गरेको छ । यहाँका दुलाहा, दुलही मन्दिरको पनि छुट्टै विशेषता रहेको छ । यस मन्दिरमा रामसीताको मूर्र्ति यसरी प्रतिस्थापित गरिएको छ । त्यो मूर्तिलाई जताबाट हेरे पनि रामसीताको सयौँ मूर्ति एकैचोटि देखिन्छ । यसका साथै विहार कुण्ड, अग्नि कुण्ड, साकेत धाम, सुन्दर सदन, श्रीगार कुञ्जलगायत दर्जनाँै मठ–मन्दिर हेर्न पर्यटक आउने गरेका छन् । जनकपुरधामका ७२ सरोवर
जनकपुरमा गंगासागर, धनुषसागर, अंगराज सर, वाल्मीकि सर, रुकमिनी सर, दशरथ तलाउसहित ७२ वटा सरोवर छन् । सरोवरका आ–आफ्नै विशेषता छन् । धनुषसागर, गंगासागरसहितका पोखरीमा स्नान गरेपछि मन पवित्र हुने तथा धार्मिक मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास छ । करिब दुई वर्षदेखि गंगासागरमा दैनिक रूपमा साँझमा गंगा आरती हुँदै आएको छ ।
सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरको अगुवाइमा हुने उक्त गंगा आरती पछिल्लो समय पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरका अध्यक्ष धनुषा शाखाका पूर्वअध्यक्ष रामआशिष यादवका अनुसार अहिलेसम्म गंगा आरतीमा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि भारतका विभिन्न चर्चित व्यक्ति सहभागी भइसकेका छन् ।
विभिन्न धर्मको संगमस्थल
हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको भए पनि अन्य धर्मावलम्बीका लागि पनि जनकपुर उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्मका लागि पनि जनकपुर महत्वपूर्ण स्थान रहेको डा. विमलको भनाइ छ । मुस्लिमहरूको पूर्वज सुफी सन्तहरूको कर्मक्षेत्र मिथिला नै रहेको तथा ती सन्तहरूको मजार (अन्तिम दाहसंस्कार गरिने स्थल)मा हजाराैँ हिन्दू मुस्लिमहरूको भिड लाग्ने गर्छ । डा. विमलका अनुसार ११औँ शताब्दीमा मुस्लिम समुदायका प्रमुख ६ शाखाहरू नक्बदी, सोहबदी, कादरी, चिस्ती, गुल्जारी र कलबदरीको जनकपुरबाट विस्तार भएको छ । जनकपुरकै १६ वडामा रहेको बाबा झुमअली शाहको मजार, महोत्तरी अध्यानपुरमा रहेको बाबा गदाअली शाह, बाहरअली शाह, रहमअली शाहको मजारले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ । सुफी सन्तहरूको कर्मक्षेत्र मिथिला नै रहेको उनी बताउँछन् ।
त्यस्तै, बौद्र्ध धर्मका १५ वटा जातका कथामा जनकपुरको वर्णन गरिएको छ । भगवान् गौतम बुद्धको अस्तु जनकपुरमा प्रवेश नदिएर मखवनमा गरिएको डा. विमल बताउँछन् । त्यस्तै, जैन धर्मका गुरु मलिनाथ र नेविनाथको जन्म जनकपुरमै भएकाले उक्त धर्मका मानिसका लागि महत्वपूर्ण स्थान जनकपुर हो । समय–समयमा जनकपुरमा जैन धर्मको विभिन्न धार्मिक पूजापाठ हुँदै आएको छ ।
धार्मिक नगरीकै रूपमा विकास गर्ने चाहना
सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा उद्योग कलकारखानाका हिसाबले जनकपुर स्थापित छ । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश नम्बर २ को राजधानीको रूपमा जनकपुरको चर्चा चलेपछि यहाँ उद्योग, कलकारखाना, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवशंकर साह (हिरा)को भनाइमा धार्मिक, पर्यटक स्थलका रूपमा विकास गर्दै जाँदा आर्थिक समृद्धितिर जनकपुरले फड्को मार्न सक्छ । ‘जनकपुरलाई धार्मिक नगरीको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ र पछिल्लो समय यहाँ पर्यटकको ध्यानमा नै राखेर लगानी गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ,’ अध्यक्ष साह भन्छन् ।
मिथिला ग्राममा पर्यटकलाई कम्तीमा एक साताका लागि बस्ने गरी प्याकेजको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यसमा मिथिला संस्कृति, परम्परा, खानपानदेखि मिथिलाको कला, संस्कृति झल्किने आकर्षित गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित योजनामध्ये राजा जनकको दरबार, रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम, राजर्षि विश्वविद्यालय, रेल सेवा विस्तारलगायत योजना कार्यान्वयन भए विकासले फड्को मार्ने छ ।
धार्मिक सहिष्णुताको मिथिला संस्कृति
यहाँको चाडपर्व, लोकगीत, कला, वेशभूषा, रहनसहन, भोजन, गरगहना, लोकगाथा नै मिथिला संस्कृति हो । मिथिलामा मानिसको जन्मदेखि मुत्युसम्मको संस्कृति र लोकगीत छन् । मिथिलाको संस्कृति, भाषा, सभ्यता संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ ।
मिथिलाको इतिहास नै अब्बल भएकाले संस्कृति उत्कृष्ट हुनु असाधारण होइन । उत्कृष्ट यस अर्थमा कि अन्य स्थानको उत्कृष्ट संस्कृतिलाई मिथिलाले पनि अपनाएको छ । यहाँ मुस्लिमहरूको गीत–संगीत उत्कृष्ट मानिन्छ । राग इमामी, राग फिर्दोसी, विवाहमा इरत बाँड्ने, महफिल लगाउने परम्परालाई मिथिला संस्कृतिले आफूमा समाहित गरेको छ ।
मिथिलामा धार्मिक सहिष्णुताको संस्कृति छ । यहाँ हिन्दू समुदायले पनि मुस्लिम समुदायका देवताको पूजा गर्छन् भने मुस्लिमले पनि हिन्दुका देवताको पूजा गर्छन् । मिथिलाका चाडपर्व ६ प्रकारका छन् । धार्मिक पर्व जस्तोकी नागपञ्चमी, अन्त चतुर्दशी, अक्षय नवमी, माघी, सप्तमी, जेठ दशहरा, हर्षोल्लाससम्बन्धी पर्वहरू झुलन, कृष्ण अष्टमी, चौथचन्द, विवाह पञ्चमी, आदि यहाँ धुमधामले मनाइन्छ । त्यस्तै, दाम्पतीय जीवनसम्बन्धी मधुश्रावणी, सोमबारी, कोगाज्रा, बरसाइत, भाइबहिनीसम्बन्धी पर्व सामाचकेवा, भरदुतिया, मनोकामनासम्बन्धी पर्व जितिया र मातापितासम्बन्धी पर्व कुसी आमावस्या, पितृपक्ष मातृनवमी आदि पनि यहाँका उल्लेख्य विषय हुन् ।
मिथिलामा जति गीतसंगीत संसारमा सायद कहीँ नहोला । यहाँ जो संगीतमै हाँस्छन्, गीतमै रुन्छन् र गीतमै बोल्छन् । गाएको सुनेर, हेरेर नै थाहा हुन्छ, यो रुवाइको गीत हो, विछोड वा शोकको गीत हो भनेर । धार्मिक, संस्कार र ऋतु गीतले मिथिलाको संस्कृतिलाई थप आकर्षक बनाएको छ । २१आैँ शताब्दीमा पनि मिथिलामा जादुटुनामा विश्वास गर्ने चलन छ । भूतप्रेत, चुडेल, अगियाबताला, मनुसदेवालगायतमा अझै पनि विश्वास गरिन्छ । यहाँका विभिन्न देवीदेवताको शक्तिपीठमा दसैँको समयमा भूत खेलाउनेहरूको संख्या उल्लेखनीय हुन्छ । त्यस्तै, भूतप्रेत लागेको खण्डमा धामीझाँक्री तथा विभिन्न देवीदेवताको सहरा लिने गरिन्छ । त्यस्तै, हिन्दू समुदायको घरघरमा आफ्ना कुलदेवताको पूजा गरिन्छ । भुइआ सोखा, गोविन्द बाबा, काली, बन्नी, गोरैया, भैरव, कालिका देवी–देवतालाई घरमै पिँढी बनाई विशेष रूपमा पूजा गर्ने प्रचलन छ । मिथिलामा तन्त्रमन्त्रमा लोकविश्वास र टुनामुनाको प्रभावले लाभान्वित हुनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ, जसलाई ठाडै चुनौती दिन पनि कठिन छ ।
जतिखेर संसार अज्ञानको अन्धकारमा हराएर पाशविक जीवन व्यतीत गर्दै थियो, मिथिला वैदिक एवं औपनिषदिक रचना गर्दै थियो, जीवन–जगत्, इहलोक–परलोक, आत्मा–परमात्मा, काल–कलातीत, जन्म–पुनर्जन्म, ऐन्द्रिकता र अतीन्द्रिय पिण्ड र ब्रह्माण्डलगायतका पुस्तक लेख्दै थियो ।
संसारको प्राचीनतम भाषा साहित्य पनि यहाँ पाइन्छ । मैथिली भाषामा अपभ्रंशपछि स्पष्ट हुन्छ । तर, मैथिलीको स्वरूप आठौँ शताब्दीमा देखिन्छ । तर, भारतीय भाषाको स्वरूप १०आँै शताब्दीमा स्पष्ट देखिन्छ । जब कि अंग्रेजी साहित्यको आरम्भ भने १४आँै शताब्दीमा भएको पाइन्छ ।
मिथिलामा आफ्नै संगीत, घरानाहरू रहेको पाइन्छ । मोरङ घराना, पुरादित्य दरबार घराना, मल्ल दरबार, पनिभोर घराना, बेतिया घराना, चर्यापदमा स्थानीय राग–रागिनीहरू पाइन्छन् । मिथिलामा प्रचलित राग–रागिनीहरूलाई महाराज नान्यदेव (१०७७–११३३) ले संरक्षित र व्यवस्थित गरेका हुन् । सिंहभूपाल नेपालका प्रख्यात मैथिल संगीतज्ञ थिए ।